आफ्ना सबै बैंक खाता एउटै एपमा 'एग्रिगेट' गरी कारोबार गर्न सकिने नयाँ भुक्तानी सेवा आउन लाग्यो
कर्पोरेट नेपाल , ३० भाद्र २०७६, सोमबार, ०१:१६ pm
मोवाइल एप तथा वेभमा आधारित डिजिटल भुक्तानी सेवामा एउटा नयाँ नाम थपिन लागेको छ । त्यो हो ‘मोरु’ । आफ्ना सबै बैंक खाताहरु एउटै एपमा एग्रिगेट गरेर वालेटमार्फतका साथै बैंकबाट समेत रियल टाइममा भुक्तानी गर्न सकिने फरक खालको भुक्तानी सेवा प्रदायक मोरुका बारेमा यसको प्रवद्र्धक कम्पनी पे नेप प्रालिका प्रवन्ध निर्देशक मनोज घिमिरेसँग गरिएको कुराकानीको सार यस्तो छः
के हो मोरु भनेको ?
हामीले भुक्तानी सेवा प्रदायकको रुपमा राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाएका छौं । हामीले आमसर्वसाधारणलाई वालेट सर्भिस दिन्छौं । यो वालेटमा उपभोक्ताले पैसा राख्नहुन्छ । अर्को कुरा यो उहाँहरुको बैंकसम्म पुग्ने साँचो हो । मोरुमार्फत जनताले कहीं रकम भुक्तानी गर्न र वस्तु तथा सेवा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ ।
नाम किन मोरु नै राख्नुभयो ?
मोरु नाम खासमा महेन्द्र राजाको पालामा पैसा यही नाममा आउँथ्यो । त्यो हिसावले पनि योम नाम छनौट गर्यौं हामीले । अर्को कुरा अँग्रेजीमा मोवाइल रुपिजको छोटो रुप पनि मोरु भयो ।
यसको अफरिङहरुमा के के हुन्छ ?
यसमा मोवाइल एप हुन्छ । एन्ड्रोइड र आईओएस दुवैको लागि हुन्छ । र, वेभ एप्लिकेशन पनि हुन्छ । डेभलप गरिसकेका छौं । हाम्रो सफ्ट लन्च तिहार अगाडि हुन्छहोला । त्यसको दुई तीन महिनामा कमर्सियल लन्च गछौं ।
अहिले भइरहेका भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुभन्दा मोरु के कुरामा फरक छ ?
फरक के चाहीं छ भने हाम्रो वालेटमा पैसा मात्रै होइन्, तपाईंले बैंक खाताको साँचो पनि राख्न सक्नुहुन्छ । त्यो भनेको के भने वालेटमा चाहीं चोरै पैसा राख्नुहुन्छ । सानो खालको भुक्तानी त्यही वालेटबाट सजिलै भुक्तानी गर्न सक्नुहुन्छ । जतिखेर तपाईंलाई अल्ली ठूलो खालको भुक्तानी गर्नुपर्यो भने सिधै बैंक एकाउन्टबाट सेटल गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसका लागि बैंकसँग नै इन्टेग्रेट गर्ने भनेर टेक्नोलोजी बनाइसकेका छौं । मानौ तपाईंसँग चार वटा बैंकका खाता छन् । ती चारैवटा खातालाई मोरुमा इन्टिग्रेट गर्न सक्नुहुन्छ । त्यो गर्ने बित्तिकै चारै वटा बैंक खातामा पैसा कति बाँकी छ ? के कस्तो कारोबारहरु भइरहेको छ ? त्यो कारोबारलाई पनि कस्तो कस्तो खर्च शीर्षकमा छुट्टाउने ? मासिक खर्च के कस्तो भइरहेको छ ? भन्ने कुराको जानकारी सजिलै मोरुबाट पाउन सकिन्छ । यसलाई अन्तर्राष्ट्रियरुपमा ‘एकाउन्ट एग्रिगेटेड्स’ भन्छ । ‘एग्रिगेशन अफ मोवाइल बैंकिङ’ भनौं न । यसको मुख्य काम यही हो । यसरी एग्रिगेट गर्नसक्ने हामी मात्रै एउटा सेवा प्रदायक हो । मोवाइल बैंकिङ भन्दा हरेक बैंकका आआफ्नो एप भन्ने हुन्छ । तर एपमा चाहीं हरेक बैंकको मोवाइल बैंकिङ आएर बस्छ । साथै, भएका खाताहरुमध्ये तपाईंले ‘यो चाहीं खाताबाट मोवाइलको टपअफ गर्छु वा बिजुलीको बिल भुक्तानी गर्छु वा कसैलाई रकम पठाउँछु वा सामान किन्छु’ भन्दा गर्न सक्नुहुन्छ । अहिले लाइसेन्स पाइसकेका भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुमध्ये अधिकांशको वालेट सिस्टम नै हो । पछिल्लो समयमा आएको सेलपेको चाहीं बैंकबाट रियल टाइम पेमेन्ट हो भन्ने सुनेको छु । मोरुजसरी सबै बैंक एकाउन्टहरु यसमा एग्रिगेट गर्न मिल्ने हो वा होइन् ? ट्रान्जेक्शन हेर्न पाइन्छ कि पाइन्नन ? मैले हेरेको छैन् । तर बाँकी अरुहरुको सर्भिसमा पहिला वालेटमा बैंकबाट वा कुनै खुद्रा पसलेकोमा गएर पैसा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै खर्च गर्न पाइन्छ । हाम्रो सोच चाहीं फिजिकल वल्डमा बैंकसँग नै कनेक्ट गर्न सकिन्छ भने किन बीचमा फिक्शन गरिराख्ने ? भन्ने हो । मोरुबाट सामान्यतया सय रुपियाँसम्मको भुक्तानी वालेटबाट र त्यो भन्दा ठूलो सिधै बैंक एकाउन्टबाट रियल टाइममा भुक्तानी गर्न मिल्ने सेवा हो । तपाईंले चेक काट्नुहुन्छ, एटीएमबाट पैसा निकाल्नुहुन्छ, एपबाट पनि पैसा कारोबार गर्नुहुन्छ । त्यो सबै मोरुको एपमा आउँछ । वालेट सर्भिस प्रोभाइडरहरुकोमा पहिला पैसा जम्मा गर्नुस, अनि सर्च गर्नुस भन्ने हुन्छ भने हामीले चाहीं तपाईंका छरिएर रहेका बैंक एकाउन्टहरुको सुचना हेर्ने । हाम्रो मुख्य अफरिङ त्यही नै हो । हाम्रो पिच भनेको मोरु एकाउन्ट एग्रिगेटर हो । तपाईंलाई हरेक बैंकलाई दर्जनौं एप राखिरहनुभन्दा एउटै एपबाट सबै काम गर्न सकियोस भन्ने नै हाम्रो फरक सोच हो । त्यो हिसावले हाम्रो कोही पनि प्रतिस्पर्धी नै छैन् ।
धेरै सर्भिस प्रोभाइडरहरु बजारमा आएर स्थापित भइसकेका छन् । तपाईंहरु नयाँ हुनुहुन्छ । कसरी प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ ?
पैसाको कारोबार भन्ने कुरा यति वाइड डोमेन हो कि यस क्षेत्रमा २०–२५ वटा कम्पनीहरु स्वस्थ्यरुपमा अपरेट हुनसक्छन् । हामीले देखेको के हो भने अधिकांशले त्यही मोवाइलको टपअप गराउने, इन्टरनेटका बिल तिर्ने, खानेपानी र बिजुलीका बिल तिर्नेमा मात्रै फोकस भएको देखिन्छ । त्यो भनेको तल भएका फलहरु हुन् । जब तल भएका फलहरु बाँडिचुडी गरेर खाइसक्छौं, सायद हामीले भेट्दैनौं पनि होला त्यो फल, त्यसपछि हामीले स्पेसलाइजेशन गर्ने अनेक कुराहरु छन् । जस्तो एउटा कम्पनीले कर्मचारीलाई तलब दिने कुरा छ । त्यसलाई फ्यासिलियट गरेर पनि एउटा कम्पनी चलाउन सकिन्छ । अथवा बीटूबी पेमेन्टहरु जो छ, त्यसलाई मात्रै फोकस गरेर पनि एउटा कम्पनी चलाउन सकिन्छ । हस्पिटालिटीमा फोकस गरेर म होटलहरुको एउटा चेन बनाउँछु अथवा अन डिमाण्ड विजनेशहरु जुन छन्, टूटल, पठाओ जस्ता, जस्ता विजनेशहरुलाई समेटेर मार्केट प्लेस चलाउँछु भन्दा पनि कम्पनी चल्छ । मैले भनेको मार्केटको समस्या छैन् । हामी फरक हिसावले जान्छौं ।
बैंकहरुसँग तपाईंहरुको एग्रिमेन्ट भइसक्यो कि बाँकी छ ?
हाम्रो सेटलमेन्ट बैंक चाहीं एनएमबी हो । अरु बैंकहरुसँग चाहीं इन्ट्रिगेसनको लागि कुरा हुँदैछ । सफ्ट लन्च गर्दा नै हामी २० भन्दा बढि बैंकसँग इन्ट्रिगेसन गरेर जाँन्छौं ।
पैसा कारोबार गर्ने कुरामा सुरक्षाको निकै ठूलो प्रश्न रहन्छ । तपाईंहरुले त्यो सुरक्षाको सुनिश्चितता कसरी गर्नुहुन्छ ?
एकदमै । सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्न हामीले ठूलो लगानी पनि गरेका छौं । म आफै पनि इन्फरमेशन सेक्युरिटी डोमेनमा काम गरेको मान्छे भएकोले त्यसको महत्व बुझेको छु । सेक्युरिटीमा लगानी नभईकन कुनै पनि बाणिज्य बैंकले हामीसँग काम गर्न राजी हुँदा पनि हुँदैन् । त्यो भएकोले हामीले कम्युनिकेशनका लागि इन्क्रिप्टिेड भीभीएन प्रयोग गछौं । इन्टरनेटमार्फत कम्युनिकेट गर्दनौं । उपभोक्ताको डेटा लिनका लागि टू फ्याक्टर अथेन्टिकेशनको कुरा हामीले गरेका छौं । हाम्रो वेभसाइट तथा वेभ एप्लिकेशनहरु, जसलाई मोवाइल एपले कन्जुम गर्छ, ती सबै सेक्युर सकेट लेयरमा रन गरेका छौं । एसटीटीएसमा हामीले प्रयोग गरेका छौं । त्योसँगसँगै हाम्रो ठूलो लगानी के कस्तो भइरहेको छ हाम्रो नेटवर्कमा ? त्यो अनुगमन गर्न स्ट्रोङ प्ल्याटफर्म बनाएका छौं । हाम्रो टिमले त्यो कुरालाई मोनिटर गरिरहेको हुन्छ ।
गण्डकी विकास बैंकद्धारा “गण्डकी स्मार्ट सेवा” सञ्चालन